Patronpath amalite ulo oru ohuru ohuru | Martech Zone
Friday, May 2, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe mbụ goro m ụgwọ na Okporo ụzọ, Ụjọ tụrụ m (ee, nke ahụ bụ eziokwu) na weebụsaịtị ahụ dị. Ọ bụ dị ọcha flash, enweghị peeji nke, ọ dịghị azụ-ọgwụgwụ njikarịcha (ọ bụ ezie na SWFObject e kwajuru), ọ dịghị ụzọ nke na-emelite ọdịnaya… na ọtụtụ n'ime ihe niile, ọ dịghị okporo ụzọ.
Ọ bụ saịtị na-efu ọtụtụ, na-enweghị nloghachi na ego. Mgbe m gakwuuru ụlọ ọrụ ahụ mepụtara saịtị ahụ, enweghị mgbaghara. N'ezie, mgbe m mere mkpesa banyere SEO, ha nyere nkwekọrịta ọzọ dị oke ọnụ iji bulie saịtị ahụ. Nke ahụ bụ ahịhịa ikpeazụ! Enweghị ụlọ ọrụ nwere akọnuche ọ bụla ga-ewu saịtị nke ọ nweghị onye nwere ike ịchọta.
O zuuru iwe! Mụ na Mark Gallo rụkọrọ ọrụ na nke anyị Ndị mmekọ na ndị ahịa na Kristian Andersen wee ha chepụta saịtị maka anyị, nke etinyere na ya Usoro njikwa ọdịnaya Imavex. Kristian nwere ụfọdụ ezigbo onyinye na nzukọ ya.
Anyị gafere oge ole na ole nke saịtị ahụ tupu anyị edozi na nhazi a. Ekwenyere m na ọ na-ekwu maka ọkachamara nke ụlọ ọrụ anyị yana ike nke ika anyị na-amalite iji nweta ume!
Saịtị dị ndụ ugbu a, na ọ mara ezigbo mma ma dịkwa mfe ịnyagharịa. (Ọ bụrụ na ị na-eche - ee, ịde blọgụ ga-abụ atụmatụ n'ọdịnihu). Nke a bụ nseta ihuenyo:
Obi dị m ụtọ na nke a bụ otu akụkụ nke anyị nwere ike ịnapụta tupu iwere onye isi ọhụụ ahịa ahịa anyị, Marty Bird! Akpọrọ m ike inyefe saịtị ochie.
Mee 2, 2008 na 9: 01 PM
Isnye bụ gị n'ụlọnga na overcharged gị maka a website na-apụghị depụtara site search engines ??
Mee 2, 2008 na 10: 12 PM
Aga m agwa gị, mana achọghị m ịkpọte nrọ ọjọọ ochie n'ime gị, Jim!
Mee 3, 2008 na 9: 49 PM
Nnukwu saịtị Doug. Enweghị ike ichere igosi gị saịtị ọhụrụ ọzọ (ndumodu ndumodu) n'ime izu ole na ole 🙂